Canal cuatro a la carta - ritiagroup.es
Pane nguva dzatinoda tora terevhizheni kwese kwese. Pamusoro pazvose, munguva idzodzo dzausingade kupotsa a mutambo wenhabvu, mota, tenisi kana yako yaunofarira show. Pasina kuenderera mberi, isu tinongoda kudhawunirodha mamwe maapplication kuti titarise DTT chiteshi chatinoziva tese pane yedu Android kifaa. Isu tinotsanangura sarudzo dzakakurumbira kuitira kuti unakirwe ne terevhizheni pafoni yako Android pese paunoda.
La aplicación se puede utilizar en directo para Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries. Mukuwedzera, iwe unogona zvakare kuwana mamwe akanonoka episodhi enhevedzano uye zvimwe zvirongwa zveterevhizheni.
En el caso de Mediaset, la aplicación está disponible para Telecinco, Cuatro, Divinity, Be Mad, Boing, FDF, Energy y Gran Hermano 24. Iwe unogona zvakare kuwana zvirongwa uye episodhi yenhevedzano yakatepfenyurwa. Iwe unogona zvakare kugadzira ako rondedzero kuti unakirwe zvizere nezviri mukati mavo.
Rimwe remasimba echishandiso ichi chimiro chayo. Nekugadzirwa kwakapfava unogona kuwana zvauri kutsvaga nyore. Zvakare, haina kunyanya kushambadza. Iwe uchawana ads mune rondedzero yemachaneli auri kubhurawuza. Iwe zvakare unozogona kuona izvo zvirimo zvakakamurwa, kwete chete nemachaneli, asi nemadingindira. Iwe unogona kuwana episodhi yenhevedzano, mafirimu, mimhanzi kana mitambo. Pasina kupokana, iyi isarudzo yakanaka kana iwe uchinyanya kufarira zviteshi zveterevhizheni kubva kune dzimwe nyika.
Lee más Tribunal de orden publico